သမ္မာကျမ်းစာအရ ကယ်တင်ခြင်းခံရပုံ။ "ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်း" အကြောင်းပြောသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ငါတို့စိတ်ဝိညာဉ်၏ကယ်တင်ခြင်းမရ။ မည်သည့်ခရစ်ယာန်မဆိုကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းသည်သူ့ဘ ၀ ၏အဓိကပန်းတိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်လူတော်တော်များများကသူတို့အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုလူအများကယုံကြည်ကြသည်။ လက်တွေ့ဘဝမှနောက်ထပ်ဘာမှမရှိပါ။
1 သမ္မာကျမ်းစာအရကယ်တင်ခံရပုံ၊ သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
2 ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။
2.1 1. သင့်ချို့ယွင်းချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပြောင်းလဲလိုပါတယ်။
2.2 ၂။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို နာခံပါ။
2.3 ၃။ ယေရှုသည်သင့်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သည်ကိုယုံကြည်ပါ
2.4 4. ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါ။
2.5 ၅။ သခင်ဘုရား၏လမ်းစဉ်အတိုင်းဆက်သွားပါ
ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ဦးစွာပထမ လိုအပ်သည်။ ယေရှုသည် သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါ။. ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် သင်လုပ်နိုင်သောအရာမရှိပါ။ဘုရားသခင်သည်၎င်းအားအခမဲ့ပေးသည်။ ဒီလက်ဆောင်ကို နှလုံးသားနဲ့ လက်ခံဖို့ပဲလိုတယ်။
သင်အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုပါက၊ သင်သည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။မရ။ ဆိုလိုတာကဘုရားသခင်ကမင်းကိုခေါ်နေတယ်။ ယေရှုကမင်းရဲ့တံခါးကိုလာခေါက်တဲ့လူနဲ့တူတယ်လို့ငါတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ မင်းဖွင့်ပြီးဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်။ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည်ငါ၏အသံကိုကြား။ တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ငါ ဝင်၍ သူနှင့်အတူစားသောက်မည်။
ထို့ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်လိုအပ်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည် သခင်ယေရှုကို သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် လက်ခံပါ။မရ။ သို့သော် သင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းဟူသည် အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။
1. သင့်ချို့ယွင်းချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပြောင်းလဲလိုပါတယ်။
ဘယ်သူမှမပြီးပြည့်စုံပါဘူး။ ငါတို့အားလုံးအမှားလုပ်ကြတယ်မရ။ ဒါကငါတို့လူသားတွေရဲ့သဘာဝဘဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကြီးမားတဲ့ပြသနာပဲ။ မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများကိုထိခိုက်စေသည်မရ။ သမ္မာကျမ်းစာကကျွန်ုပ်တို့၏အမှားများသည်သေခြင်းနှင့်ထာ ၀ ရအပြစ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။
ရောမ 6: 23
ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါ ဖြေရှင်းချင်တာက သဘာဝပါပဲ။ ဟိ ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပထမခြေလှမ်းမှာမင်းမှာချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့ပါသင်စိတ်မသက်မသာခံစားရသည်နှင့် သင်ကွဲပြားစွာနေထိုင်လိုသည်မရ။ ဒါကိုခေါ်ပါတယ် နောင်တ။
၂။ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်များကို နာခံပါ။
သမ္မာကျမ်းစာက သင့်အား ဘုရားသခင်က အထူးနည်းလမ်းဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ သူက မင်းကိုချစ်ပြီး မင်းကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူး။ သို့တိုင်အောင်၊ တန်ခိုးရှိသမျှရှိသော်လည်း၊ သင်သည် သူ့ကိုချစ်သည်ဖြစ်စေ မချစ်သည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်က သင့်အား ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ နာခံရန် အတင်းအကြပ် မလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မင်းအမှားလုပ်မိရင် ဘုရားသခင်ကို နာကျင်စေတယ်။
ဘုရားသခင်သည်သင်၏ကောင်းကျိုးအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ သင်နာခံသောအခါ၊ သင်သည် အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် မင်းမနာခံတဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်တာ အများကြီးပဲ။ el Mundo။ ထိုကွောငျ့, ဘုရားသခင်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပြစ်ဒဏ်ကိုကျင့်သုံးသည် တရားမျှတမှုမရ။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးတာကိုမကြိုက်ဘူး၊ ခွင့်လွှတ်ချင်တယ်။
ပြဿနာကမင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်။ သင်လုပ်သောကောင်းသောအရာများသည်မကောင်းသောအရာများအတွက်မပြုလုပ်ပါမရ။ ဥပမာအားဖြင့်လူသတ်သမားသည်သူတစ်ပါးအသက်ကိုကယ်ခြင်းဖြင့်အသက်မရှင်နိုင်ချေ။ ဒီဘဝမှာပေးဆပ်ရမယ့်အကြွေးတွေကများလွန်းတယ်။ မင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုတွက်ချက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ပြစ်ဒဏ်သည် ထာဝရဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဥပဒေအားလုံးကိုစောင့်ထိန်းမည့်သူမည်သူမဆိုအားလုံး၌အပြစ်ရှိသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမကျူးလွန်ဟုမဆိုရ၊ သင်မသတ်ရဟုဆိုသည်။ မင်းအခုအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာကိုမကျူးလွန်ဘူးဆိုရင်မင်းဥပဒေချိုးဖောက်သူဖြစ်သွားပြီ။
ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကမင်းအတွက်ဒဏ်ငွေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအမည်ရှိသော လူသားအဖြစ် မြေကြီးပေါ်သို့ ကြွလာခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့သမျှကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့သော်လည်း အပြစ်မရှိခဲ့ပါ။ ထို့နောက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာတွင် အသေခံရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ပြီးပြည့်စုံပြီး ထာဝရဖြစ်သောကြောင့်၊ သူပြုသောယဇ်သည် ပြီးပြည့်စုံပြီး ထာဝရဖြစ်သည်။ အပြစ်အားလုံးအတွက် အဖိုးအခကို ပေးဆောင်တော်မူခဲ့သည်။
လူတို့သည်တစ်ကြိမ်သာသေပြီး၊ ဤနောက်မှသာသေရမည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းအတိုင်းဖြစ်သည် အစမ်းထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူများစွာ၏အပြစ်များကိုထမ်းရန်တစ်ကြိမ်သာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူ့ကိုစောင့်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်အပြစ်နှင့်မဆိုင်သောဒုတိယအကြိမ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
4. ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါ။
ယခုတွင်အပြစ်ကြွေးကိုပေးချေပြီးပြီ၊ ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုအခမဲ့ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်နေဆဲ, ဘယ်သူ့ကိုမှလက်ခံဖို့အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး။ သာ ယေရှုကို ယုံကြည်သူတွေ၊ သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါ။ သူတို့၏အပြစ်များကိုနောင်တရလျှင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်.
ဘုရားသခင်သည်သားတော်တစ်ပါးတည်းကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်သည်ဤလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၎င်း၊
ယေရှုကိုသင်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းသည်သင်၏အသက်တာထဲသို့ ၀ င်ရန်တံခါးဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်သေ။ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းမှကင်းလွတ်သောဘဝသစ်ကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ယေရှုနောက်သို့လိုက်ရန်နှင့်သူ့အတွက်အသက်ရှင်ပါမရ။ ဒါဆိုရင်မင်းဘဝကပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လျှင် ဂုဏ်ယူပါသည်။ မင်းအတွက်ကောင်းကင်မှာပါတီတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ မဆုံးပါဘူး။ အခု မင်းဘဝက မတူတော့ဘူး။ သမ္မာကျမ်းစာကကယ်တင်ခြင်းကိုဒုတိယမွေးဖွားခြင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်မရ။ ယခုသင်ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည်။
နောင်တရသော အပြစ်သားကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်များရှေ့၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ကို ငါဆို၏။
လူးကပ်စ 15: 10
ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ မင်းတစ်နေ့လုပ်ရမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည် ယေရှုနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနည်းလမ်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောပါ၊ ဆုတောင်းပါ၊ ကျမ်းစာဖတ်ပါ၊ အခြားယုံကြည်သူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရအောင်ကြိုးစားပါ။ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူအစဉ်အမြဲရှိလိမ့်မည်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! မင်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် သမ္မာကျမ်းစာအရဘယ်လိုကယ်တင်ခံရသလဲ။ ခက်ခဲသောလမ်းဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိသည်၊ သို့သော်ဆုသည်ထာဝရအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခုမင်းသိချင်ရင် သမ္မာကျမ်းစာအရဘဝရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ, ဆက်လက် browsing Discover.online ။
သမ္မာကျမ်းစာအရ တစ်စုံတစ်ဦးကို မည်ကဲ့သို့ ခွင့်လွှတ်မည်နည်း။